रास्ट्रिय खबर – Page 20 – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर (page 20)	रास्ट्रिय खबर	भूकम्प गएको डेढ वर्षपछि रातो मच्छिन्द्रनाथको पुनर्निर्माण सुरु
202 Views २४ मंसिर, काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्प गएको डेढ वर्षपछि रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माण सुरु भएको छ ।
ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकास्थित बुङ्मतीमा रहेको यो मन्दिर भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ । शुक्रबारदेखि निर्माण थाल्ने गरी टेण्डर लगायत सबै प्रक्रिया टुंग्याइएको छ ।
पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेका अनुसर शुक्रबार औपचारिक रुपमा श्रीलंकाली राजदूतले मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणको सुरुवात गर्नेछन् ।
डेढ वर्षभित्र बनिसक्ने
यो मन्दिरको पुनर्निर्माणको जिम्मा श्रीलकाली सरकाले लिएको छ । २०७२ को मंसिरमै श्रीलंकाली सरकारले मन्दिर र आनन्दकुटी बिहार पुनर्निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।
झण्डै ५ करोडको लगानीमा मन्दिर निर्माणको काम हुने घिमिरेले बताए । यसमा लाग्ने सबै खर्च श्रीलंकाले नै बेर्होनेछ । ‘टेण्डरको प्रक्रिया ४ महिना पहिले नै सुरु भएको थियो । तर, चाडबाड, जात्रा लगायतका कारण समयमै निर्माण थाल्न सकिएको थिएन’ घिमिरेले भने, ‘साइत पनि र्जुर्नुपर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित समयभन्दा केही ढिलो गरेर भएपनि निर्माण थाल्दैछौं ।’ उनकाअनुसार अबको करिब डेढ वर्षभित्र मन्दिरको पुनर्निर्माण भइसक्नेछ ।
पुरातत्वको सुपरीवेक्षण रहने
मन्दिरको पुनर्निर्माण श्रीलंकाले गरेपनि यसको रेखदेख र सुपरीवेक्षण भने पुरातत्व विभागले नै गर्नेछ । मन्दिर निर्माणका लागि पुरातत्व विभागले यसअघि नै कार्यदेश जारी गरिसकेको थियो ।
मन्दिर निर्माणको डिजाइनसमेत विभागले टुंग्याइसकेको छ । मन्दिर पूर्ण रुपमा पहिलेको जस्तै बन्नेछ । मन्दिरमा काठ, इँटा, ढुंगा, चुना, र सुर्कीको प्रयोग गरिनेछ । जगमा आवश्यक परेमा समान्य मात्रा सिमेन्टको पनि प्रयोग हुन सक्नेछ । बाहिरी संरचनामा भने सिमेन्टको प्रयोग हुनेछैन ।
मुलुकमै पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण
309 Views मंसिर २३, २०७३- मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले मुलुकमै पहिलोपटक कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरेको छ । केन्द्रमा भक्तपुरका ३६ वर्षीय बलराम नागाको कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो । उनकी दिदी ४१ वर्षीया सानुमाया लागेजुले कलेजो दान गरेकी थिइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३ ले कलेजो प्रत्यारोपणसँगै मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूको आठवटा अंग लिने र प्रत्यारोपण गर्ने बाटो खुला गरेपछि हालको प्रत्यारोपण सम्भव भएको हो । अब मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपणको लक्ष्य लिइएको केन्द्रले जनाएको छ । हाल मुलुकमा बर्सेनि करिब एक हजार जनाको कलेजो फेल हुने आकलन विज्ञहरूको छ ।
दक्षिण कोरियाको सियोलस्थित सामसुङ मेडिकल सेन्टरबाट आएका पाँच जना विशेषज्ञको सहयोगमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको थियो । शल्यक्रियामा केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा डा.मोहनदेव भण्डारी, डा.प्रवीण जोशी, डा.सम्पूर्णमान तुलाधर संलग्न थिए । यस्तै एनेस्थेसिया र सघन उपचारमा डा.सुवास आचार्य, डा.आरती राई, डा.महालक्ष्मी देउजा, डा.किरण अधिकारी, डा.सन्दीप भण्डारी र डा.मिलन थापा थिए । पेट र कलेजो विशेषज्ञहरूको नेतृत्व डा.दीपेश गुरुवाचार्य र डा.नीरज जोशीले गरेका थिए । नर्सिङ टोलीको नेतृत्व इन्दिरा प्रधानले गरेकी थिइन् भने कलेजो रोग विशेषज्ञ डा.दिलीप शर्मा, डा.सुधांसु केसी, डा.अनन्त श्रेष्ठ, डा.विनीता जोशीले यसमा सहयोग गरेका थिए ।
मृगौला प्रत्यारोपण सुरु गरेको तीन वर्षपछि केन्द्रमा चिकित्सा विज्ञानमा धेरै जटिल मानिएको कलेजोको प्रत्यारोपण सुरु भएको हो । भारत पुगेर निजी अस्पतालहरूमा कलेजो प्रत्यारोपण गराउँदा एक करोडदेखि डेढ करोडसम्म लाग्ने गरेकोमा अब नेपालमा १५ लाखसम्ममा हुन सक्ने केन्द्रका निर्देशक एवं प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठले बताए । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कलेजो प्रत्यारोपणलाई दिगो बनाउन अझै केही समय विदेशी विज्ञको सहयोग चाहिने बताए । डा. श्रेष्ठका अनुसार विज्ञहरूको यही टोलीले मंगोलियालगायतका देशमा पनि कलेजो प्रत्यारोपण गरेको थियो । ‘अहिले ती देशका आफ्नै चिकित्सक सक्षम भएका छन्,’ उनले भने ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीको कलेजो मदिरा सेवनका कारण फेल हुने गरेको छ । त्यसपछि हेपाटाइटिस ‘बी’ र ‘सी’ को संक्रमणले गर्दा कलेजो फेल हुने गरेको छ । मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूबाट दुई वटा मृगौला, दुई वटा फोक्सो, मुटु, प्याङक्रियाज, सानो आन्द्रा, आँखालगायतका आठ वटा मानव अंगलाई अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ ।
सभामुखलाई ओलीको जवाफः संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भए संसद् चल्न दिन्छौँ
379 Views काठमाडौं: एमाले अध्यक्ष एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सहमति हुनै नसक्ने बताएका छन्।
बिहीबार सभामुख ओनसरी घर्तीसँगको छलफलमा ओलीले सभामुखलाई यस्तो जवाफ दिएका हुन् । सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तापछि पत्रकार सँग कुरा गर्दै ओलीले भने, ‘एमाले सहमति गर्न तयार छ । तर, सहमतिका लागि व्यवस्थापिका संसद्‍मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेकय सम्बन्धीको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ ।’
भेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीसँग सभामुखले संसद् चल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी छिन् । सभामुखको आग्रहपछि ओलीले संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भए एक मिनेटपनि संसद अवरुद्ध नहुने प्रष्ट जवाफ दिएका छन् ।
‘हाम्रो पहिलो सर्त नै संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हो’, भेटवार्तापछि ओलीले पत्रकार सँग भने, ‘संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भए नयाँ सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’
ओलीसँगको छलफल अघि सभामुखले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेकी थिइन् । सभामुखसँगको भेटपछि देउवाले अबको केही दिनमै पछिल्ला दिनमा देखिएको राजनीतिक संकटको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
एमालेलाई सहमतिमा नआई सुख्खै छैनः प्रचण्ड ‘आयोगको प्रतिवेदन ढिला बने पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचन’
391 Views २३ मंसिर, धनगढी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यक्रम र मिति घोषणा हुने बताएका छन् ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तासँगै निर्वाचनको वातावरण बनाएको दाबी गर्दै उनले अहिले विरोधमा रहेको नेकपा एमाले लगायतका सबै दल पनि निर्वाचनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सात नम्बर प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षणलाई बिहीबार बिहान कैलालीको धनगढीमा सम्बोधन गर्दै ओलीले निर्वाचनको मिति घोषणापछि देश अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त हुने उनले धारणा राखे ।
‘म काठमाडौं फर्किएको केही दिनभित्र निर्वाचन कार्यक्रम र मिति घोषणा हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि देश कुद्छ । सिंगो राष्ट नयाँ गतिमा अघि बढ्छ । माओवादी पार्टी र सरकार दुबैले देशलाई नयाँ गति दिनेछ ।’
उनले अघि भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्तावको रणनीतिक महत्व छ । यो एक प्रकारको राजनीतिक एक्सन हो । हिमाल, पहाड तराईलाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने एक्सन,’ उनले भने, ‘यो एक्सनबाट आउने रियक्सनले मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजान्छ । तिनै पार्टी मिलेर निर्वाचनमा आउनुपर्छ । नआई सुख्खै छैन ।’
माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले असन्तुष्टिलाई थाति राखेर निर्वाचनमा होमिन कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिए ।
दुई नम्बर प्रदेशसहित रोल्पाको थवाङ, बझाङको काँडा, नुवाकोट र झापाको केही गाविसबाट विशेष प्रस्ताव आएकाले पुनर्संरचनाको आयोगको प्रतिवेदन आउन ढीला भएको भन्दै उनले विवाद समाधान नभए पुरानै सरचनाअनुसार पनि चुनाव हुनसक्ने बताए ।
‘गाविसलाई गाउँपालिका भनेर नामाकरण गरौं भन्ने धेरै पार्टीको मत देखिएको छ । म भने अझै केही दिन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै गर्नुपर्छ भन्ने जोडमा छु’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यदि त्यसो हुनै नसक्ने परिस्थिति भए हामी त्यसलाई पनि मान्न तयार छौं । तर के कुरा सत्य हो भने अब गाविसको चुनाव भने हुनेछैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले सरकारले राष्ट्रघात गरेको भनेर आरोप लगाउने गरेकोमा आपत्ती जनाए ।
आफूले कांग्रेस-एमालेले ल्याएको विगतको प्रस्ताव अनुुसार नै पहाड र तराईलाई छुट्याएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्ला पहाडमै राख्ने र तराईको जिल्ला तराईमै राख्ने प्रस्ताव कांग्रेस एमालेकै थियो ।
६-७ पानाको त्यस प्रस्तावमा केपी ओली जीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सुशील कोइरालाले एक ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ,’ ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यही प्रस्तावलाई हल्का संशोधन गर्दा राष्ट्रघाती हुने तर। उहाँहरु चाहीँ राष्ट्रवादी हुने । बडो बिचित्रको स्थिति देखिरहेको छु मैले ।’
प्रधानमन्त्रीद्वारा चमेलिया आयोजनाको स्थलगत अनुगमन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दार्चुलास्थित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । उनले सुरुङभित्रै छिरेर आयोजनाको अनुगमन गरे ।
चमेलियाको सुरुङ साढे चार हजार मिटरभन्दा बढी लामो छ । बीचमा सुरुङ भासिएकाले काम रोकिएको छ । तर, त्यसको मर्मत गरी १० महिनाभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तयारी अनुसार कामलाई तिव्रता दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितको टोलीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङसमेत थिए । आयोजना प्रमुख अजय दाहालले हालसम्म भइरहेको कामबारे जानकारी गराएका थिए ।
सुरुङमार्गको अवलोकन गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकेसम्म छिटो काम सम्पन्न गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । तोकिएको समय अवधिभन्दा अघि नै काम सम्पन्न गरेमा आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने उनले बचन दिए ।
आयोजनाको कूल स्वीकृत लागत १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । यो आयोजना २०१७ डिसेम्बर ३० तारिखमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यसअघि उनले शिखर गाविसको बलाँचस्थित आयोजनाको कार्यालय परिसरमा कर्मचारी र स्थानीय जनसमुदायलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
दार्चुलाबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितको टोली अपरान्ह पौने चार बजे सुर्खेत आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली एक्स्पोको उदघाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
363 Views २३ मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । साथै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि आरोपै आरोप लगाए ।
बिहीबार फोरमका पाँच केन्द्रीय सदस्यसहित विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड सरकारमाथि पैसा नखाई भूकम्प पीडितहरुलाई राहत नदिने आरोप लगाए । भने ‘सरकारलाई जता पैसा छ, त्यतै ध्यान छ । भूकम्प पीडितलाई राहत दिन समेेत वास्ता गरेको छैन । मैले भनेको चित्त बुझ्दैन भने मसँग प्रश्न गर्नुस् । तर, मलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने हिम्मत छैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू पहिचानवादी भएको बताए पनि व्यवहारमा नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताए । उनले भने, खुब पहिचानको कुरा गर्नुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत जाँदा किन राष्ट्रिय पहिचान झल्कने दौरा सुरुवाल नलगाएको ?’
प्रचण्ड सुट लगाएर भारत भ्रमणमा गएको भन्दै उनले अघि भने, यो उहाँको नक्कली नारा हो ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि आफूले काम गरेको तर, जस प्रचण्डले लिएको दाबी गरे । उनले भने, मेरै नेतृत्वको सरकारले लोडसेडिङ हटाउने तयारी गरेको थियो । भारतबाट विजुली ल्याउने सम्झौता मेरै पालामा भएको । तर, अहिलेको सरकारले लोडसेडिङ हटाएको जस खाँदैछ ।’
उनले माओवादीसँग सरकार सक्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको दाबी गरे । कांग्रेस, माओवादी र मधेसी केन्द्रीत दल हुँदा पनि सरकारको गियर जाम भएको भन्दै उनले भने, उहाँहरुसँग सरकार चलाउने क्षमता नै छैन । आवश्यक परे हामी जुन सुकै बेला सरकार चलाउन सक्छौं ।’
अधिकांश समय माओवादी र सरकारको ओलाचनामा खर्चिएका ओलीले आफ्नो आलोचकमाथि पनि खनिए । माओवादीले लुटेको पैसाले चलाएका मिडिया एमालेविरुद्ध खनिएको उनको आरोप छ ।
225 Views २३ मंसिर, काठमाडौँ । राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै छिन् ।
सभामुख घर्तीले आज दिउँसो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेकाे उनका प्रेस सल्लाहकार बविन शर्माले जानकारी दिए ।
सभामुख घर्तीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’सँग भने शुक्रबार छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनपछि उत्पन्न परिस्थिति, राजनीतिक दलबीचमा देखिएको संवादहीनता, महाअभियोग र आगामी निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
सुवास नेम्बाङ आफ्नै नजिरको शिकार, ओनसरीले ५ मिनेट उभ्याइन्
13 Views २२ मंसिर, काठमाडौं ।
सरकारले संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहितका केही दलले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएका छन् ।
संसदमा एक सांसदले संसोधनको विरोध भाषण गर्ने र त्यसपछि विरोध गरिरहेका दलका सबै सांसद एक साथ उठेर संसद अवरोध गर्ने रणनीति देखिएको छ ।
संसदमा संसोधन प्रस्ताव छलफल गर्ने सूची नराखिएपनि एमाले लगायतका दलले संसद अवरोध कायम राखेपछि आजित बनेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले बुधबार आफ्ना पूर्ववर्ती सभामुख सुवास नेम्बाङको सिको गरिन् ।
पटक पटक संसदमै समाधान खोज्न र सबै दल मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएपछिपनि विपक्षी सांसद नबसेपछि ओनसरीले नयाँ जुक्ति निकालेकी हुन् ।
उनले विगतमा आफूहरुलाई उभ्याउँने नेम्वाङसहितका विपक्षी सांसदहरुलाई पाँच मिनेटसम्म संसदमै उभ्याइन् अनि मात्र सभामुखले शुक्रबार सम्मकालागि संसद बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेकी हुन् ।
ओनसरीले नेम्बाङको सिको गर्दै गलाउने रणनीति लिएपछि विपक्षी दलका सांसद पाँच मिनेटसम्म उभिएको उभियै भए ।
केही सांसद धेरै बेर उँभिनु परेपछि अगाडीको टेवलमा आड लगाउन थालेका समेेत देखिन्थे । केही दिन अघि माइक्रोबसबाट खसेर घाइते भएका चित्रबहादुर केसी पनि अगाडीको टेवलमा आड लगाउन पुगेका थिए ।
नेम्बाङले आफ्नो कार्यकालमा साना दलले संसद अबरोध गर्दा चारघण्टासम्म संसदमा उभ्याएको नजिर छ ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको इच्छा ! सुक्खा बन्दरगाह र महाकालीमा पुल निर्माण गर्ने आश्वासन
464 Views २२ मंसिर कञ्चनपुर । संविधान संशोधनको रस्साकस्सी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पश्चिम नेपालको दुई दिने भ्रमणमा निस्किए । काठमाडौंबाट सेनाको हेलिकोप्टरबाट दाङ ओर्लिएका उनी त्यहाँबाट कैलालीको धनगढी हुँदै नेपालको पश्चिम सीमाना कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी पुगे ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोधारा चाँदनीमा आउने पहिलो बहालवाला प्रधानमन्त्रीको रेकर्डसमेत राखेका छन् । दोधारा चाँदनीको कञ्जभोजमा निर्माण गर्ने भनिएको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भनिएको जग्गाको स्थलगत अवलोकन गर्न प्रचण्ड यहाँ आएका हुन् ।
‘यसअघि कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्री यहाँ आउनु भएको थिएन । हजुरलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहर प्रसाद खनालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोधारा नजिकैको एक नदी किनारमा बनाइएको हेलिप्याडमा स्वागत गर्दै भने ।
नदीको बगरबाट करिब एक किलोमिटर टाढा गाडीको यात्रामार्फत् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सचिव टंकमणि शर्मासहितको टोली बन्दरगाह निर्माणस्थल अवलोकन गर्न गएको थियो । साथमा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् सात नम्बर प्रदेश इञ्चार्ज लेखराज भट्टसमेत थिए । प्रजिअ खनाल र माओवादी नेता भट्टले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुक्खा बन्दरगाह निर्माणबारे जानकारी गराएका थिए ।
सो क्षेत्र भारतीय सीमा बजार खटिमाबाट करिब १२ किलोमिटर वर पर्दछ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा रेलमार्ग छ र त्यससँग जोडिने गरी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा कञ्चनपुर सबै प्रदेशमा सबैभन्दा धनी हुने बताए ।
सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलमा ८० बिगाह भन्दा धेरै जग्गा रहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले बडो चासोपूर्वक कुरा सुने र भने, ‘त्यसो भए रेलमार्ग ल्याउनु पर्‍यो ।’
स्थलगत अवलोकन पछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय निमाविको प्रांगणमा आयोजित सभालाई उनले संक्षिप्त सम्बोधन गरे । करिब तीनमात्रै मिनेट भाषण गरेका उनले भने, ‘नेपालको यति महत्वपूर्ण भूगोललाई नेपालसँग राम्रोसँग जोड्न राज्यले अहिलेसम्म किन ध्यान दिएन होला बडो चिन्ता लागिरहेको छ । यस भूगोलमार्फत सिंगो नेपालसँग जोड्ने कुरालाई मैले पहिलो प्राथमिकता दिनेछु ।’
उनले अगाडि भने, ‘महाकालीको पुल निर्माणको प्रक्रिया र यहाँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अभिन्न रुपले जोडिएको छ । मैले आज यहाँ आएर सुक्खा बन्दरगाहको जमिन हेरिसकेपछि के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु भने सरकारले यो महाकाली नदीको पुल निर्माण गर्ने र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र बैज्ञानिक रुपमा अगाडि बढाउने छ ।’
महाकाली नदीमा पुल निर्माण भएमा र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा कञ्चनपुरको र विशेषगरी दोधारा चाँदनी गाविसका जनताको दुःखकष्ट अन्त्य हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक साँस्कृतिक रुपले जे जति अप्ठ्यारा भोग्नु भएको छ त्यसको अन्त्य हुनेछ । तपाईंहरुका दुःख कष्ट पीडा मैले महसुस गरेको छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
कर्मचारीहरुलाई प्रचण्डले भने- मलाई रिजल्ट चाहियो
दोधारा चाँदनीबाट पुनः कैलालीको धनगढी फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले होटल साथीमा जिल्लाका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै जनताका काम छिटो छरितो गर्न र विकास निर्माणलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘बजेट ८० प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ । तर त्यति भएको छैन । लक्ष्य अनुसार काम गर्नुस्, जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिनुस् । मलाई रिजल्ट चाहियो ।’
कैलालीमा विरोधमा कालो झण्डा, स्वागतमा १६ किलोको माला
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कञ्चनपुर जानु अघि धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम महोत्सव उदघाटनमा सहभागी भए । धनगढी ब्यारेकमा ओर्लिएका उनी सेती अञ्चलस्तरीय प्रहरी तालिम केन्द्रको प्रांगणमा आयोजित महोत्सवमा पुगेका थिए ।
प्रचण्डका आगमनलाई मध्यनजर गर्दै एमाले र थरुहट कार्यकर्ताहरुले जिल्ला बन्द आह्वान गरेका थिए । प्रहरीले करिब ८० जना बन्दकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको भनिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड महोत्सव स्थलमा जाँदा एक व्यक्तिले कालो कपडा हल्लाउँदै विरोध जनाइरहेका थिए ।
उनी एक्लै थिए तर पनि प्रहरीले ति व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएन । बरु प्रचण्डसहितको टोली चोक चोकमा बालिएका टायरको कालो धुलो उडाउँदै महोत्सवस्थलमा प्रवेश गरेको थियो ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमालेले दाङ जिल्ला पनि बन्द गरेको थियो । शिक्षण संस्थाहरु समेत बन्द गरिँदा अहिले चलिरहेको अर्धवार्षिक परीक्षा समेत स्थगित भएको छ । तर, दाङमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बन्दको सुइँको समेत पाएनन् । किनकी उनी हेलिकोप्टरबाट सिधै सिसहनिया महदेवा जोड्ने पुल शिलान्यास गर्न सिधै राप्ती नदीको बगरमा अवतरण गरेका थिए । शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मानिसहरुको उपस्थिति कम जस्तो लाग्यो भनेर आयोजक समितिका सदस्यहरुलाई सोधे । उनीहरुले भने, ‘आज एमालेले बन्द आह्वान गरेको छ, त्यहि भएर मान्छे पनि थोरै भए होलान् ।’
यस्तो उत्तर सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आश्चर्य मान्दै ‘हो र !’ भनेका थिए ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा !
महोत्सव आयोजक उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले प्रचण्डलाई १६ किलोको माला लगाइदिएर स्वागत गरेको थियो । अघिल्लोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा २१ किलोको माला लगाइदिए पनि ५ वटा माग सम्बोधन भइसकेकाले १६ किलोको माला लगाइदिइएको आयोजकले बताए ।
प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा ठट्यौली पाराले फेरि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाइदिए यसरी मालाको भारी नै बोक्न नपर्ने बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो पटक २१ किलोेको मालाको भारी बोकेको थिएँ । अहिले घटेर १६ किलो भएछ । अर्को पटक पनि प्रधानमन्त्री भएपछि यसरी मालाको भारी लगाउनै नपर्ने हो कि !’
सुदूरपश्चिमबासीको तर्फबाट महोत्सव आयोजक समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष १६ बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो । १० वर्षसम्म ट्याक्स फ्री जोन घोषणा गर्नुपर्ने, विशेष औद्योगिक क्षेत्र -सेज)को स्थापना हुनुपर्ने, गेटा विमानस्थललाई वैकल्पिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने लगायतका मागपत्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको थियो ।
सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि आफूले पटक-पटक पहल गरिरहेको भन्दै नयाँ नेपालको निर्माण सुदूरपश्चिमबाटै हुनुपर्ने बताए । उनले दैजीमा सेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै अब हरैयामा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिए ।
पश्चिम सेतीबारे चीनसँग मिलेर काम गर्ने, खप्तड क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायीलाई लगानीको वातावरण बनाउने र कैलालीमा गहुँको सुपर जोन स्थापनाको पहल गर्ने उनले बताए ।
बिहीबार खप्तडको यात्रा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितको टोली धनगढीको होटल साथीमा बास बसेको छ । उनले बिहीबार प्रदेशस्तरीय कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ ।
बिहीबार बिहान धनगढीबाट खप्तड जाने र सुर्खेत हुँदै काठमाडौं फर्किने प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम छ । सुर्खेतमा उनले कर्णाली एक्स्पो उदघाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
१६ किलोको माला लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेः संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन
314 Views १६ किलोको माला लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्दै आयोजक । तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका ३६ एमाले नेता तथा पक्राउ
धनगढीः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्घाटनका लागि बुधबार धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि ११ औँ सुदूरपश्चिम महोत्सव बुधबारदेखी धनगढीमा सुरु भएको छ । महोत्सव उद्घाटनपछि प्रचण्डलाई आयोजकले १६ मागसहित १६ किलोको माला लगाइदिएका छन् । केही वर्ष अघि महोत्सवको उद्घाटन गर्दा उनलाई २२ मागसहितको २२ किलोको मालाको भारी बोकाइएको थियो । उनले १६ किलोको माला लगाउँदै अबको एक वर्ष आफू प्रधानमन्त्री भए सुदूरपश्चिमका सबै माग पूरा गर्ने दाबी गरे ।
महोत्सव उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन विरुद्ध सडक तताइरहेको एमालेविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘केपी ओलीले गरेको त्यही प्रस्ताव राष्ट्रवादी हुने तर, हामीले दर्ता गर्दा कसरी राष्ट्रघात भयो ?’ प्रधानमन्त्रीले आफू मधेसी, जनजाती, थारु सबैलाई मिलाएर लैजाने र सबैलाई संविधानको अपनत्व ग्रहण गराउने संकल्पमा लागेको दाबी गरे । ‘नेपाली कांग्रेस र एमालेले हिजोका दिनमा जे प्रस्ताव गरेको थियो, मैले त्यसैको वरिपरि रहेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हुँ त्यसमा केही हेरफेर गर्न सकिन्छ तर फिर्ता भने हुँदैन’, उनले भने ।
उनले सबैलाई संविधानको स्वामित्व ग्रहण गराउँदै तीन वटै निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयमा जानुपर्ने समय भएको बताउदै भने, ‘सडकमा उर्लेर जनतालाई दुख दिनुभन्दा हातेमालो गरेर अघी बढ्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’
सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्घाटन गर्दै दाहालले भने, ‘अब विकासको सुरुवात सुदूरपश्चिमबाट हुन्छ ।’ बजेट भाषण गरेजस्तै सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्षेत्रका लागि करमा छुट दिने, सहुलीयत दरको विजुली दिने, कैलालीको हरैयामा विषेश औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, भारतसँगको गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नती गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाहको काम अघि बढाउने, चमेलीयाको निर्माण निर्धारित समयमै सक्ने, जडिबुडी प्रशोधन केन्द्र तथा खप्तड रामारोसनको पर्यटकीय विकास गर्ने पनि दाबी गरे । पश्चिम सेतीका लागि चीनको एक कम्पनीसँग कुराकानी अघि बढिरहेको बताउदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पश्चिम सेती बनेमा सुदूरपश्चिम मात्रै नभएर देश नै लोडसेडिङ मुक्त हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री धनगढी पुग्दा विरोध प्रदर्शन
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार दिउँसो दुई बजे धनगढी नजिकै रहेको नेपाली सेनाको बोराडाँडी ब्यारेकमा पुग्दा धनगढी बजार बन्द थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका दलले प्रधानमन्त्रीले दर्ता गराएको संसोधन प्रस्तावको विरोधमा बुधबार दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म धनगढी बजार बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।
एमाले, जनमोर्चासहितका दलले गरेको बन्दका कारण धनगढीको मुख्य बजारमा पसल बन्द थिए भने बजार क्षेत्रमा सवारी साधन समेत चलेका थिएनन् । यसरी बन्द गराउदै हिडेका एमाले र जनमोर्चाका ३६ नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
टायर बालेर प्रधानमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम महोत्सवस्थलमा जान रोक्ने क्रमममा प्रदर्शनकारीलाई बल प्रयोग गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले एमाले कैलालीका जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ सोडारी, जिल्ला सचिव रणबहादुर चन्द, जिल्ला सचिवालय सदस्य यज्ञराज बास्तोला, युवासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य मदनराज रेग्मी, अनेरास्ववियु कैलालीका अध्यक्ष चुडामणी भट्टसहितका ३६ नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रकाउ परेका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले बुधबार साँझ रिहा गरेको छ ।
प्रचण्ड धनगढी पुग्दा तनाव, २५ एमाले नेता समातिए
256 Views धनगढीः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सुदूरपश्चिम महोत्सवमा सहभागी हुन धनगढी पुग्दा यहाँ तनाव भएको छ ।
महोत्सवमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने भएपछि प्रतिपक्षले अवरोध गरेको हो। अवरोधलाई हटाउने क्रममा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएपछि केहीबेर झडप पनि भयो। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले जिल्ला अध्यक्षसहित २५ नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ।
महोत्सव उद्घाटनमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै प्रहरीले एमालेका जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ कोडारी, सचिव रणबहादुर चन्द, सचिवालय सदस्य यज्ञ बास्तोला, अनेरास्ववियु जिल्ला अध्यक्ष चुडामणि भट्ट, युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य मदनराज रेग्मीलगायत २५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
महोत्सवमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उपस्थित हुने भएपछि एमाले, जनमोर्चालगायत दलका नेता तथा कार्यकर्ताले संविधान संशोधन प्रस्तावको विधेयकको विरोध गर्दै टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनपछि कोणसभामा सहभागी भएका नेता तथा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दाङमा पुल शिलन्यास गरेर धनगढी पुगेका छन् ।
Page 20 of 230« First...10«1819202122	»	304050...Last »	Recent Posts